တကယ်လို့ သင်က developer တစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ client နဲ့ စကားပြောရတာမျိုးကို သင်နှစ်သက်မှာမဟုတ်ဘူး။ Code ရေးချင်တာပဲ သိတယ်။
နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလိုလို client တွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါ developer တွေနဲ့ client တွေအကြားမှာ ဆက်ဆံပြောဆိုရမှာ စကားလုံး အသုံးအနှုန်းက အဓိကပါပဲ။ Developer အများစုက introverts တွေဖြစ်တဲ့အလျှောက် အခုလိုမျိုး တခြားသူတွေနဲ့ စကားပြောဆိုရတာမျိုးကို သိပ်ပြီးတော့ ဘဝင်မကျတတ်တဲ့အတွက် သူတို့တွေအတွက် အလေ့အကျင့်ရသွားဖို့အတွက် အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုကတော့ လိုအပ်တယ်။ အဲ့ဒီတော့ တစ်ချို့အချက်လေးတွေကို highlight လုပ်ပြီး ပြောပြသွားချင်ပါတယ်။
၁) လက်ခံရရှိကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း
ပုံမှန်အားဖြင့် လုပ်ဆောင်ရမယ့် တာဝန်ကို client တွေကနေ ရရှိပြီဆိုရင် email လောက်ပဲ ဖတ်ပြီး ဘာမှ ပြန်မပြောတာထက် အနည်းဆုံး လက်ခံရရှိကြောင်း ပြန်ပြောတာမျိုး လုပ်သင့်တယ်။
ဥပမာဆိုရင် အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် -
Client က အချက်အလက်တွေပေးပြီ။ Developer ကလည်း လုပ်ဆောင်ဖို့ အသင့်ရှိပြီဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ လက်ခံရရှိကြောင်းနဲ့ အကယ်၍ မေးခွန်းတွေ ရှိလာခဲ့ရင် ပြန်လည်ဆက်သွယ်မယ် အစရှိသဖြင့် ပြန်လည်ပြောကြားသင့်တယ်။
အဲ့လိုမဟုတ်ပဲ developer က တခြားအလုပ်တွေပိနေတယ်ဆိုရင် လက်ခံရရှိကြောင်းပြောကြားပြီး ဖြစ်နိုင်သမျှ မြန်မြန်စနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုပြီး ပြောကြားသင့်တယ်။ ဒါမှလည်း client အနေနဲ့လည်း အခု မအားသေးဘူးဆိုတာကို သိနိုင်သလို သူပေးတဲ့အချက်အလက်ကို သင်လက်ခံရရှိကြောင်း သိပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်လိုမျိုးတွေ မလုပ်သင့်ဘူးလဲဆိုရင် မအားသေးဘူးဆိုပြီး ရက်ပေါင်းများစွာ ဘာမှပြန်မပြောပဲထားတာမျိုးနဲ့ မအားသေးကြောင်း ပြန်ပြောတဲ့အခါမှာ ကိုယ်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ထည့်သွင်းပြောဆိုတာမျိုးကို ရှောင်သင့်တယ်။ မလိုအပ်ပဲနဲ့ client နဲ့ ကြားဆက်ဆံရေးက ပိုပြီးတော့ ရှုပ်ထွေးသွားလိမ့်မယ်။
၂) အမြဲတမ်း update လုပ်နေပါ
ပုံမှန်အားဖြင့် developer တွေက အချက်အလက် လက်ခံရရှိပြီးကြောင်း ပြန်လည် ဆက်သွားပြီးပြီဆိုရင် မပြီးမချင်း ထပ်မံဆက်သွယ်တာမျိုး မလုပ်တော့တာတွေကို အများအားဖြင့် တွေ့ရပါတယ်။ အကယ်လို့ တစ်ရက် နှစ်ရက် ပြီးနိုင်တာမျိုးဆိုရင် အဲ့လိုလုပ်တာမျိုးက ပြဿနာမဟုတ်ပေမယ့် တစ်ပတ် နှစ်ပတ်လောက် ကြာတာမျိုး ဆိုရင်တော့ ရံဖန်ရံခါ အကြောင်းကြားတာမျိုး လုပ်သင့်တယ်။ ဒါမှလည်း client အနေနဲ့ သူ့အတွက် developer က သေသေချာချာ လုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတာကို သိနိုင်ပြီး ကျေနပ်နိုင်မယ်။ Update ပေးတဲ့နေရာမှာ ဘာတွေပြီးပြီ၊ နောက်ဘာတွေ ဆက်လုပ်ဖို့ရှိမယ် အစရှိသဖြင့်အဓိက အကြောင်းအရာလောက်ကိုပဲ ပေးသင့်ပြီး ပုံကြီးချဲ့တာမျိုး အရမ်းအကျဉ်းချုံးလောက်ပဲ ပြောတာမျိုးကို ရှောင်သင့်တယ်။ တစ်နေ့ကို သုံးလေးငါးခါလောက် အကြောင်းသွားသွားပြန်နေတာမျိုးကလည်း client ကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်နေတယ်။ အဲ့တော့ တစ်ပတ်လောက်ကြာတယ်ဆိုရင် သုံးခေါက်လောက်ဆိုရင် လုံလောက်ပြီပြောလို့ရတယ်။
ဒါပေမယ့် ဘယ်တော့မှ လိမ်ညာပြီး ကိုယ်မလုပ်ရသေးတဲ့အရာ တစ်ခုကို ပြီးပြီဆိုပြီး အကြောင်းမကြားသင့်ဘူး။ အကယ်လို့ ကိုယ်က ပြီးပြီလို့ လိမ်ညာပြောတဲ့အရာတစ်ခုက အကြောင်းအမျိုးအမျိုးကြောင့် မေ့သွားခဲ့တယ်ဆိုရင် client အတွက်ကော ကိုယ့်အတွက်ပါ မကောင်းပါဘူး။
၃) အရမ်းအရှည်ကြီးတွေ မရေးပါနဲ့
သင်သိထားရမှာက client တွေက အရမ်းရှည်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ထိုင်ဖတ်နေဖို့ အချိန်မရှိဘူးဆိုတာပါပဲ။ အဲ့ဒီတော့ ဖြစ်နိုင်သမျှ တိုတိုနဲ့ လိုရင်းရအောင် ရေးတတ်ဖို့ လိုအပ်တယ်။ အရမ်းအရှည်ကြီးတွေ ရေးတဲ့အခါမှာ client က သင့်ကို သူတို့လိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ် သေချာနားလည်မှု မရှိဘူးလို့ ထင်သွားနိုင်တယ်။ တတ်နိုင်သ၍ လိုတိုရှင်း ရေးတာအကောင်းဆုံးပဲ။
အကယ်လို့ စာအရှည်ကြီးရေးဖို့ အထိဖြစ်လာပြီဆိုရင် စာတွေရေးနေမယ့်အစား client ကို ဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဆက်သွယ်ပြီး တိုက်ရိုက်မေးလိုက်တာက ပိုပြီးတော့ မထိရောက်ဘူးလား? Client လည်း ချက်ခြင်း ပြန်ဖြေပေးလို့ရသလို အချိန်တွေပေးပြီး ရေးနေ ဖတ်နေစရာလည်း မလိုတော့ဘူး။ ပြီးတော့ voice communication က client နဲ့ သင့်ကြားမှာ စာလုံးတွေထက် ပိုပြီးတော့ ရင်းနှီးသွားစေပါတယ်။
၄) ခွင့်ယူမယ်ဆိုရင် အကြောင်းကြားသွားပါ
သင်ဟာ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အလုပ်မသွားဖြစ်ဘူး အထူးသဖြင့် ခွင့်ရက်ရှည် (ဥပမာ ခရီးရက်ရှည်သွားရတော့မယ်) ယူမယ်ဆိုရင် client ကို ကြိုတင် အကြောင်းကြား သင့်တယ်။ ကိုယ်ခရီးသွားမယ့်ရက်ကြားမှာလည်း တတ်နိုင်သ၍ ရှုပ်ထွေးမယ့်အရာတွေကို တာဝန်ယူ အာမခံဆောင်ရွက်တာမျိုး မလုပ်သင့်ဘူး။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ရာ ပြဿနာတက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် သင့်အနေနဲ့လည်း ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်သလို မျက်နှာပျက်စရာတွေလည်း ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ သင်ခရီးသွားမယ့်အချိန်အတိုင်းအတာအတွင်း သင့်အစား ဆက်သွယ်လို့ရနိုင်မယ့် တခြား developer တစ်ယောက်ကို လွှဲပေးခဲ့တာမျိုး လုပ်တာပါပဲ။
ဒါမှလည်း သင်နေမကောင်းဖြစ်နေတာမျိုးတို့ အရေးတကြီး ကိစ္စရှိနေတဲ့အချိန်မျိုးတို့မှာ teammate တွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ team leader ကပဲဖြစ်ဖြစ် သင် မအားလပ်တဲ့အကြောင်းကို Client ကို ပြန်ပြောပေးနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။ Client ဘက်ကကြည့်ရင်လည်း အနည်းဆုံးတော့ တခြားတစ်ယောက်ကို အကြောင်းပြန်ဖို့ လွှဲပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကို နားလည်ပြီး သင့်ကို ယုံကြည်လာနိုင်မယ်။
ပြောဆိုဆက်ဆံလို့ကောင်းတဲ့ Client တွေရှိသလို ပြောရဆိုရခက်တဲ့ Client တွေလဲရှိတယ်။ သဘောကောင်းတာမျိုးဆိုရင် ပြဿနာမဟုတ်ပေမယ့် လက်ပေါက်ကပ် ရိုင်းတဲ့ Client မျိုးဆိုရင် ဘယ်လို ဆက်ဆံမလဲ? အရေးအကြီးဆုံးကတော့ သူတို့ ဘာပဲပြောပြော ကိုယ်က အဲ့ဒီစကားလုံး အသုံးအနှုန်းတွေအပေါ် ခံစားနေမယ့်အစား တတ်နိုင်သမျှ ခေါင်းအေးအေးထားပြီး ပြန်လည် တုံ့ပြန်တာမျိုး ဖြစ်သင့်တယ်။ အကယ်၍များ သင်ဘက်ကအမှားဆိုရင်တောင်မှ မကြောက်ပါနဲ့။ အခြေအနေကို သေချာရှင်းပြပါ။ ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ ပြန်လည် ပြုပြင်လို့ရတဲ့ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို သေချာရှင်းပြပါ။ တကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ မသိဘူးဆိုရင် team leader လိုလူမျိုးကို အကူအညီတောင်းပါ။
သင့်မှာကော clients တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘယ်လို experience တွေရှိခဲ့ဖူးလဲ? ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံးနဲ့ မျှဝေကြည့်ကြတာပေါ့။